Indlu encane ibungazwe ngu-Melanie
Ikharavani ephendulwe ngothando nokunakekelwa yaba indlu encane ethokomele, ikumema ukuthi uphumule endaweni ezolile nokuthula. Itholakala ngaphakathi kwengadi yethu yangasese, ekhoneni elithule engadini yethu encane yezithelo. Ngaphansi kwe-13km kunamabhishi anesihlabathi amaningi ahlukahlukene.
I-Tiny House inakho konke okudingayo i-Wifi yamahhala ne-Netflix kanye nengadi ehlukile ene-pergola nendawo yokosa inyama enhle yasehlobo.
Ungasebenzisa futhi ichibi lethu elabiwe elilungile ukupholisa ngezinsuku ezishisayo zasehlobo kanye nejimu yethu eyabiwe.
I-16 m² Dream Tiny House ifakwe yonke into edingekayo.
Uhlelo lwaphansi oluvulekile lunikeza isikhala esanele sombhede omkhulu ophindwe kabili, i-TV ene-Netflix, ikhishi elinomshini we-espresso, indawo yokuhlala kanye negumbi lokugezela elincane eline-Wc. Ishawa enkulu yangaphandle iseduze kwendlu. Ingadi yangasese inikeza indawo yokuphumula nokugcoba.
Ijimu yethu encane ihlanganisa yonke imishini yokuqeqesha edingekayo kanye nedamu lethu lokubhukuda (20m2 kanye no-1.20m ukushona) liqinisekisa ukupholisa okufanele ngezinsuku zasehlobo ezishisayo zamaGreki.
Ipharadesi lethu elincane lamaholide litholakala endaweni enhle nenokuthula e-peninsula yase-Akrotiri. Idolobha Elidala eliyingqayizivele lase-Chania, elinendawo yokudlela eningi, amabha, izimpawu zendawo zomlando kanye nemnyuziyamu iqhele ngamakhilomitha angu-8. Amanye amabhishi anesihlabathi amahle kakhulu eCrete (Seitan Limania, Stauros, Tersanas, Kalathas, Loutraki, Marathi, Macherida) asendaweni engamakhilomitha angu-13 futhi akumema ukuthi ubhukude futhi uhambe emanzini angajulile.